Uhlu Lokuhlola Olungenayo: Amasu Wokukhula Wama-21 | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 15, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Njengoba ungacabanga, sithola izicelo eziningi zokushicilela ama-infographics Martech Zone. Kungakho sabelana nge-infographics njalo ngesonto. Futhi asizinaki izicelo lapho sithola i-infographics ekhombisa nje ukuthi inkampani ayenzanga utshalomali olukhulu ukwakha inani le-infographic. Lapho ngichofoza kule infographic evela kuBrian Downard, Co-Founder of Amasu Ebhizinisi e-ELIV8, Ngibazile njengoba sabelane ngomunye umsebenzi abawenzile.
Lokhu infographic; nokho, akukho okuncane okuphelelisiwe! UBrian nethimba lakhe bashicilela i- infographic entsha ekufezeni ukukhula kwebhizinisi ngokumaketha okungenayo okubalulekile, okuhle, futhi kunikeza izibalo eziyisisekelo zokusekela isu ngalinye. UBrian nethimba lakhe banikela ngezinsizakalo ezihlanganisiwe zokubonisana nezokumaketha kumakhasimende amaningi ahehayo.
Kuyini Ukungeniswa Okungenayo?
Ukumaketha okungenayo kuyisu elisebenzisa okuqukethwe ukuheha amathuba okuzibandakanya nokuguqula nezinkampani eziku-inthanethi. Izinkampani zisebenzisa amabhulogi, ama-podcast, ividiyo, ama-eBooks, izincwadi zezindaba, amaphepha amhlophe, usesho lwezinto eziphilayo, imikhiqizo ebonakalayo, ukumaketha kwezokuxhumana nabantu, nezenyuso ezikhokhelwayo ukufinyelela izethameli ezifanele.
UBrian uhlanganise le infographic enikezela nge uhlu lokuhlola lokungena ngaphakathi kwamasu abalulekile angama-21 wokuphaka azokhulisa ibhizinisi lakho usebenzisa amasu wokumaketha angenayo.
Landa Uhlu Lokuhlola Olunwetshiwe lwama-94
Ungakusheshisa Kanjani Ukukhula Kwebhizinisi Ngokumaketha Okungenayo
Dala Inani nge-Blogging - Amabhizinisi athola i-blog Ithrafikhi engama-77% ngaphezulu futhi Izixhumanisi ezingama-97% ngaphezulu kunalezo ezingakwenzi.
Sebenzisa Imidiya Yezokuxhumana Ukushayela Ithrafikhi - 2.03 billion abasebenzisi bezokuxhumana nika amabhizinisi isiteshi esisha esimangazayo ukuze ukushayela ithrafikhi futhi thola amakhasimende amasha.
Sebenzisa i-SEO Ukutholakala Ku-inthanethi - I-93% yokuhlangenwe nakho kwe-inthanethi qala ngenjini #search. Uma wenza kahle indawo yakho nokuqukethwe kwezinjini zokucinga, uzo khulisa amazinga akho futhi thola ithrafikhi eningi.
Sebenzisa Izithameli Zabanye Abantu - Amabhizinisi abona a 6-to-1 ukubuya lapho bengathola futhi bahlanganyele izethameli ezifanele kwamanye amasayithi.
Dala ukukhangisa kwe-Retargeting ne-PPC Online - Izivakashi ezibuyiselwe emuva zikhona I-70% cishe ngaphezulu ukuguqula kuwebhusayithi yakho.
I-Traffic eqondile enezingcingo ezenziwa - Ama-70% amabhizinisi abanazo izingcingo zokubizela esenzweni ekhasini labo eliyisiqalo.
Dala inani ngokunikezwa kokuqukethwe - Premium #content yakha Izikhathi ezi-3 njengokuhola okuningi njengokumaketha kwendabuko okuphumayo futhi izindleko 62% ngaphansi.
Guqula izivakashi ngamakhasi okufika - Ama-56% akho konke ukuchofoza kuwebhusayithi ziqondiswe ekhasini langaphakathi, hhayi ikhasi lasekhaya.
Sebenzisa Amafomu Wokukhetha Ukukhulisa Ukuguqulwa - Amabhizinisi anokukhetha ukungena #amafomu angakwazi khuphula izinga lokuguqulwa ngo-1000% noma ngaphezulu!
Sebenzisa Ubufakazi Bomphakathi Ukwakha Ukuthembeka - Ikhasimende #ukubuyekezwa can khulisa ukusebenza ngokukhangisa ngama-54% ngoba Abantu abangama-88% bathemba #izibuyekezo ngabanye abathengi njengoba bethemba izincomo ezivela koxhumana nabo.
Sebenzisa Ukuphathwa Kobudlelwano Bamakhasimende ukulandela ukuhola - I-CRM ingakwazi ukwandisa imali ngo-41% kumuntu ngamunye othengisayo lapho isetshenziselwa ukulandelela nokukhulisa imikhondo.
Thumela ama-imeyili ukuvala ukuthengisa okuningi - Yonke imali engu- $ 1 esetshenziswe ekuthengisweni kwe-imeyili inenzuzo emaphakathi ye- $ 44.25!
Setha i-Marketing Automation - Ukuzenzakalelayo the ukuhola ukukhulisa inqubo ikhiqiza i- 10% noma ukwanda okukhulu ngemali engenayo ngezinyanga ezi-6-9 kuphela.
Dala okuqukethwe okugxile ekuthengiseni - 61% yabantu maningi amathuba okuthi uthenge enkampanini eletha i- # okuqukethwe.
Sebenzisa izibalo ukuthola iziteshi eziphezulu - +Ama-50% amabhizinisi ukuthole kunzima uku khombisa umsebenzi wokumaketha ngqo emiphumeleni yemali engenayo.
Yiba Nokuxhaswa Kwamakhasimende Okumangalisayo - 65% wamakhasimende ashiya i-a insizakalo yamakhasimende eyodwa empofu nakho!
Dala ama-Commentates kuma-Social Media - 53% yabantu abalandela imikhiqizo ezinkundleni zokuxhumana bathembeke kakhulu kuleyo mikhiqizo.
Umvuzo Amakhasimende Athembekile - Kubiza izikhathi 5 okuningi ukuthola amakhasimende amasha ukwedlula ukugcina ekhona. Kungakho kubalulekile ukuthi wena klomelisa amakhasimende akho aqotho ukuzigcina zibuya ngokuningi.
Sebenzisa ukwenza kube ngokwakho kuDrayivu Engagement - Amabhizinisi abona ukwanda kwe- 20% ekuthengiseni ngokuhlangenwe nakho okwenziwe kwaba ngokwakho neziphakamiso zoku nikeza amakhasimende okuqukethwe nemikhiqizo abayifunayo.
Sebenzisa amathuluzi okuhlola kanye nempendulo - Kuthatha Okuhlangenwe nakho okungu-12 okuhle kwamakhasimende ukwenza kuphela 1 okungekuhle Okuhlangenwe nakho. Ukuqoqa impendulo kuzosiza susa ithuba yesipiliyoni esibi samakhasimende.
Qoqa Ukubuyekezwa & Ubufakazi - Ucwaningo lukhombisa lokho70% yabathengi bheka ukubuyekezwa komkhiqizo # ngaphambi kokuthenga. Ukucela amakhasimende izibuyekezo ngesikhathi esifanele, kuzodala abameli bomkhiqizo ukuthi iheha abantu abasha.
Tags: Ama-AnalyticsizethameliibhulogiUBrian Downardshayela esenzweniubiza isenzoiziteshiuhlu lokuhlolauhlu lokuhlolaukuguqulwaukubhuloga ezinkampaniukwethembekaCRMctaukwethembeka kwamakhasimendeukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimendeukwesekwa kwamakhasimendeELIV8imeyili Marketingamathuluzi okuphendulamarketing kwangaphakathiuhlu lokuhlola lokungena ngaphakathiukuguqulwa kwekhasi lokufikaamakhasi okufikaamakhasimende athembekileukuzenzekelayo kokuzenzekelayookunikezwayoamafomu wokungenaukuzenzelaIzibuyekezookuqukethwe okugxile ekuthengiseniseosocial mediaubufakazi bezenhlalakahleUkuhlolaubufakazi
I-Oct 28, i-2015 ku-1: i-00 PM
Bengifuna ukusho futhi ukuthi ngiyabonga ngokwabelana nangamagama anomusa!
I-Oct 28, i-2015 ku-2: i-05 PM
Nov 5, 2015 ngo-4: 16 AM
Sizobona lolu hlu. Thx okuningi
Jan 11, 2016 ku-8: 29 AM
Lokho uhlu olukhulu lokuthengisa olungenayo olwabiwe.